Meelaha laga heli karo Rikoooo si toos ah looguma dhawaaqin, ma jiraan xal? (Win 7 / 8 +) - Rikoooo
Sceneries laga heli karaa Rikoooo aan ku dhawaaqay si toos ah, waa ay jiraan xal? (Win 7 / 8 +)
Marxaladani waxay u shaqaysaa labada Prepar3D iyo FS2004.
By default, FSX waxa lagu xiraa in «C: \_ Program Files (x86) \_ Games Microsoft \_ Microsoft Flight Qabille X». Dhibaatada waxa ay tahay in on Windows 7 iyo 8 + ama xataa Windows 10 gacanta kuma hayaan a full of files gudaha «Microsoft Flight Qabille X», taas oo looga hortago barnaamij ka qoray file qaabeynta ah aad. Si loo xaliyo dhibaatada in, u tag «C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games», ka dibna la sameeyo click ah xaq on folder ee «Microsoft Flight Qabille X», riix «Guryaha», ka dibna on the «Security» tab. Halkan, dooran «Users (xxxxxx)», ka dibna riix «beddeli». In uu furmo suuqa kaliya furay, mar kale dooran «Users (xxxxxx)», riix «Full gacanta», ka dibna «beddelitaanka». Hadda, aad leedahay si aad riix «OK» iyo Windows cusbooneysiin doonaa rukhsadda ah.